အိန္ဒိယတွင် Quikr ဂျော့ဘ် - ဒေလီမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင် - မွန်ဘိုင်း Careers
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at စက်တင်ဘာလ 28, 2018
အိန္ဒိယတွင် Quikr ဂျော့ဘ်
အိန္ဒိယအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် Quikr ဂျော့ဘ်ဆိုဒ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်နေရာလွတ်တစ်ခုအရေအတွက်လျှောက်ထား။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှသက်ဆိုင်ရာကြောင်းရှာရန်အလုပ်အကိုင်။ အဆိုပါ Quikr အလုပ်အကိုင်များကုမ္ပဏီ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းယခုရရှိနိုင်။ ယခုမှာသင်သည်သို့ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်း၌ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏န်ဆောင်မှုမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောသတင်းရင်းမြစ်ပေးနေကြသည်။ ကျနော်တို့လုပ်သားများငှားရမ်းနေကြ။ ထိုတစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ Company ၏ထိပ်တန်းပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပါတယ် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ငါတို့ ယခုပြည်ပမှာအလုပ်ရရန်ကူညီခြင်း.
ယူအေအီးနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဂျော့ဘ်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်သစ်ကိုအလုပျသမားရဖို့ရှာကြသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကသူတို့ရဲ့အဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းများ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်ငှားရမ်း။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများကလှုံ့ဆော်ထားသည်။ ကျနော်တို့ပေးန်ထမ်းခေါ်ယူမှုန်ဆောင်မှုများမြင့်မားသောအဆင့်မှာရှိပါတယ်။
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမျှော်လင့် ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်ရတဲ့ရန်။ ကျနော်တို့ပြည်ပမှာလုပ်သားများကူညီနေတာပါ။ သို့ ပြည်ပရှိဖြစ်လာ။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအားလုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ငှားရမ်းအကူအညီပေးနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းများအတွက်အရေးအပါဆုံးသဘောတူညီမှုရန်ဖြစ်ပါသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း profile များကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အလုပ်တစ်ခုအမှုကိုပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ကြောင့်, အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်ယခုပြောင်းရွှေ့ကလူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဦးစားပေးအဖြစ်။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့်အလုပ်ရှာဖွေယုံကြည်လို့ပဲ။ အလုပျသမားမြားအတှကျရှည်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယူအေအီးအတွက်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူကျနော်တို့ပေးအပ်ခဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့လမ်းညွှန်မှု.
အိန္ဒိယတွင် Quikr ဂျော့ဘ် - ဒေလီ, မွန်ဘိုင်း, ဘန်ဂလို
ယင်းအတွက်အဆိုပါကုမ္ပဏီ အိန္ဒိယဒေသ။ ကျိန်းသေပိုပြီးန်ထမ်းရန်မျှော်လင့်ထားဘူး။ ထိုအခါဥပမာတစျခုမဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများကဖြစ်ပါတယ်။ လည်းပဲ ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီများမှ။ ထိုမှတပါး, သငျသညျရနိုငျသောအရေးအပါဆုံးအလုပ်အကိုင်များတစ် Quikr ပေါ်တယ်နှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Forbes မဂ္ဂဇင်း 500 အတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်ခိုငျမာသော မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ငှားရမ်း။ အိန္ဒိယဈေးကွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတလျှောက်ကြီးထွားလာသည်ကို ထောက်. ရှေ့သို့ရွေ့လျားနေပါသည်။ ပြီးအများကြီးပိုအသစ်များကိုအလားအလာလုပ်သားများလိုအပ်ပါလိမ့်မည် အလုပ်ထိပ်မြို့ကြီးများအတွက်.
ထို့နောက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်လူကြိုက်များကော်ပိုရေးရှင်းဒုက္ခရှိခြင်းမဟုတ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအရ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလူမှုမီဒီယာကျော်ငှားရမ်းသည်။ ဥပမာ LinkedIn အတွက် Quikr။ အဖြစ်ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ တကယ်ပါပဲ နှင့် Naurki။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီအတုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖို့အကြံပေး ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ဖို့ကဒီကုမ္ပဏီကိုသုံးပါ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - လွှတ်တင်ခြင်း CV ကိုယနေ့တွင်!
များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေ အလုပ်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ၌ရှိကြ၏။ စိတ်၌ဤအတူငါတို့ ယူအေအီးနှင့်ကာတာနိုင်ငံအတွက်ကူညီပေးနေ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းကနေတချို့တောင်းဆိုမှုကိုရှိခြင်းနေကြသည်။ ကိုအသကျရှငျကြီးမားသောအလားအလာစျေးကွက်အားလုံး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အများအပြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။ NaukriGulf ဥပမာအားဖြင့်, Uber နှင့် ဂျယ်ရီ Varghese။ ဤရွေ့ကား, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိပ်ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အကုမ္ပဏီ။ ကြောင်း၏ဥပမာတစ်ခုမှာ၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေနေလူတွေအများအပြား ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ site များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
ဒီတော့စံအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ အမြောက်အများ အလုပ်သမားများ အကောင်းဆုံးကိုကုမ္ပဏီရဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ နှင့်ဤအချက်က The Naukri ပေါ်တယ်သင်တို့အဘို့ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် အဆိုပါလေဆိပ်အလုပ်အကိုင်များရ။ ဒါကကုမ္ပဏီအကြီးမြတ်ဆုံးသင်တို့အဘို့ရွေးကောက်တော်မူ၏တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်စပီလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ခိုငျမာသော ပြည်ပမှာလုပ်သားများငှားရမ်း.
ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုမှာ။ ဒါကကုမ္ပဏီအိန္ဒိယစျေးကွက်အပေါ်အလွန်အမင်းကောင်းစွာမယ်။ ထို့အပွငျအများအပြားရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆောင်းပါးများ ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းကို။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အဓိကသာဓကရှိကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားအွန်လိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစား၏။ စြေးထား ထိုကဲ့သို့သောကုန်စည်ပြပွဲအဖြစ်ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းက။ ကျိန်းသေ, သူတို့ကနိုင် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲ.
ထိုအခါကမ္ဘာအဝှမ်းမှလုပ်သားများ။ ဒီကုမ္ပဏီရှာဖွေခြင်း တစ်ဦးအပြုသဘောအလုပ် site ကိုအဖြစ်။ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလွန်အမင်းအိန္ဒိယလုပ်သားများအကြံပေးသည်ကိုရင်ဆိုင်ရပါစေသော။ ထို့အပြင်အသစ် လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကို။ သူတို့ကိုအသုံးချနိုင်ကြသည်။ အဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိ။ အလွန်အမင်း paid ရှာဖွေခြင်း တူရကီကနေအလုပ်အကိုင်တွေကမ်းလှမ်းမှု။ အခြားတစ်ဖက်တွင်နေ့စဉ်အလုပ်အကိုင်သစ်ကမ်းလှမ်းမှု updated နေကြသည်။ လူတွေအများအပြားဥပမာအားဖြင့်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှသို့ရောက်လာသည်ကား, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများ။ ထို့ပြင်အိန္ဒိယနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ ဒါကြောင့်အသစ်အလားအလာအလုပ်ရှာသူတစ်ဦးကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်အဆိုပြုရဖို့ သူတို့နှင့်အတူ။
ဒါကကုမ္ပဏီကျော်ပို့စ်တင်ဖြစ်ပါတယ် 30,000 အလုပ်အကိုင်များနေ့တိုင်းကမ်းလှမ်း။ ဒီတော့ဝေးကြောင်းနေ့စဉ် update လုပ်ပေးခြင်း။ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှထိုမှတပါး, လူသစ် အဲဒီမှာ CV ကိုပို့စ်တင်။ ဥပမာအားဖြင့်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ရုံသူတို့ကိုစီးဆင်း။ အဖြစ်ပါကစ္စတန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီကုမ္ပဏီမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပို့စ်တင်နေသည်, စကားပြော။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီ သာအိန္ဒိယတွင်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့?။ အဘယ်သူမျှမကိုသူတို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသွားကြဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ တောင်မှသင်ကဝေးလံခေါင်သီအလုပ်လုပ်နှင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘလော့ဂါဖြစ်လာနိုင်သည်!.
အဘယ်ကြောင့်ငါ Quikr အလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
အကောင်းဆုံးကိုမှတ်တစ်ခုမှာ, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်၏လမ်း။ ဤရွေ့ကား, မြဲမြံစွာအဘို့, သငျသညျတန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်သူများနိုင်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တကယ်သင်သည်တတ်နိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အလုပ်အစာရှောင်ခြင်းအရ။ နှင့်အင်ဒီးယန်းတွေအများကြီးကြောင်းသွေးကြောသိတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စရှိရာအရပ်၌သင်တို့မှလာနေကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်ကြောင့်ရနိုင်။ နှင့်သင်တန်းတာ သည်အခြားအလုပ်တစ်ခုဆိုဒ်များထက်ပိုမြန်.
လည်းအတူလုပ်ကိုင်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းအကြောင်းသင့်လမ်းပြကောင်းတစ်ဦး blog post:။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျနော်တို့ပို့စ်တင်ထားပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အကြံပေးချက်များအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် နှင့်မည်သို့အခြားကုမ္ပဏီများအကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်လုပ်သားများကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အတွက်တန်ဖိုးကိုရှာဖွေတာ။ ငါတို့သည်အားမရသဖြင့်ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်း သိ. ဘယ်မှာအလုပ်အတွက် hit ရန်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကြောင့်ထိုသို့ပြုလုပ်နေတာ ကျွန်တော်ယူအေအီးကိုယုံကြည်။ အထူးသဖြင့်အဘို့ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ။ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအရေးယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်တယ်လမ်း။ ဖြစ် အခွင့်အလမ်းများအတွက် High-class ကိုပံ့ပိုးပေး.
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ငါတို့အဘို့အပေးနေကြတယ် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်း။ ယူအေအီးရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဒါရိုက်တာ။ အမြဲတမ်းလှုံ့ဆျောနှင့်ဟုပြောသည် အိန္ဒိယတှငျနထေိုငျသူတိုင်းအလုပ်ရှာသူ။ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြီးသားဒီကုမ္ပဏီကြောင့် operated ဘယ်လိုမြင်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့နှငျ့အတူအလုပျရရန်အကြံပြုပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရှုမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ point ကနေစကားပြော။ အိန္ဒိယနှင့် ယူအေအီးစျေးကွက်ကြီးထွားလာသည်။ အသစ်ကလူ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှ CV ကို drop သငျ့သညျ။ နှင့်ကျိန်းသေဤကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload တင်နေရမည် စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်.
ယခုအချိန်တွင် Quirk ဂျော့ထိပ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီအိန္ဒိယတွင်အကြီးဆုံးအလုပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ 160,000 ထက်ပို အလုပ်ရှာဖွေသူများသူတို့နှင့်အတူ crypto အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အခြားကုမ္ပဏီကဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုက၏အရွယ်အစားဖြစ်သွားကြောင်းလမ်းမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ MBA ဘွဲ့ရဖို့အဆင့်အထိတက်ရောက်ရှိ။ ကုမ္ပဏီစစ်ဆင်ရေး၏ရှည်လျားသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏ updated profile ကို post အဖြစ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ပိုမြန်နိုင်သမျှထက်အလုပ်ရ။ သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျပြည်ပမှာအနေဖြင့်လာမယ့်နေလျှင် နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အပြုသဘောအလုပ်ရှင်ရှာဖွေနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သင့်ရဲ့အသေးစိတျသငျသညျမှတျပုံတငျသငျ့သညျ.
ထိုအခါနောက်တဖန်သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤအတူစိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အိန္ဒိယ site ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ post ရယူပါ။ ရုံစောင့်ဆိုင်း အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အဘို့သင့် emai သို့လာရန်ကမ်းလှမ်းl.we လျှင်အတော်လေးသေချာမသိကြ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ Quirk jobs website တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
အိန္ဒိယလုပ်သားများသည်အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်။ ထိုအ Quikr အလုပ်အကိုင်များ site ကိုသူတို့ကိုအားမရဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, က CV ကိုသွားနှင့် upload တင်မှရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်။ နယူးအလုပ်အကိုင်များကိုသင်ထားရှိနိုင်ပါသည်သည့်အခါဒါမှသင်သိဘယ်တော့မှမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။